MT4 Atụmatụ Kacha Mma - Nkebi nke 1 - Mụta ahia 2
MT4 Atụmatụ kacha mma - Nkebi nke 1
Atụmatụ 'ga-enwe' MT4 maka gị!
Ikpoko MT4 bu nke kacha ochie na ahia ma nwee otutu ihe.
MetaTrader4 ikpo okwu bu uzo mbu mbu ahia nke MetaQuotes Software meputara na mbu 2000s ma haziri ya maka ahia ahia. Ọ bịara n'efu maka obere ndị ahịa azụmaahịa wee bụrụ onye ama ama n'etiti ndị ahịa ahịa. N'oge a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-ere ahịa na-enye MT4 ndị ahịa ha. Mana otu n’ime isi ihe mere MT4 ji bụrụ ihe ama ama bụ ịdị mfe nke iji ya na nnukwu atụmatụ ọ nyere. Ma ọ dị ka ọ dị ugbu a; ọ bidoro dị ka ngwungwu eserese dị mfe ma meziwanye kemgbe ọtụtụ afọ, na-agbakwunye atụmatụ ọhụrụ. Ugbu a, ikpo okwu MT4 na-enye ọtụtụ atụmatụ.
Dị mfe ojiji - Otu n’ime ihe mere MT4 jiri bụrụ ihe ama ama bụ maka na ọ nwere ezigbo mmekọrịta enyi na enyi - na-eme ka ọ dị mfe iji. O nwere ihe niile kwesiri ekwesi na ebe kwesiri ekwesi; ị nwere ngalaba chaatị dị na etiti etiti na-ewere akụkụ kachasị elu nke ikpo okwu. N'elu ikpo okwu bụ ngalaba egosi, nke na-eche nke ọma n'ihi na ọ bụ ngalaba ebe ị ga-arụ ọrụ kachasị. N'elu aka ekpe, igbe igbe nche ahia di, nke na-amalite site na ego abuo na ndi ozo, ihe ndi ozo di oke onu ahia. N'okpuru ebe a ka igbe ihe nchọgharị na ihe omuma gi na ndi okacha amara. Na okpuru ị nwere ike ịchọta ọnụ nke nwere ihe karịrị ngalaba iri, dịka:
- Azụmaahịa: ebe egosiputara ahia na-echere.
- Akụkọ ihe mere eme,
- Igbe akwụkwọ ozi,
- Ihe ngosi Forex,
- Isi koodu,
- Ọkachamara na
- Akwụkwọ akụkọ
Nwere ike imegharị ngalaba dị iche iche nke ikpo okwu gburugburu, mana gịnị kpatara nke a mgbe etinyechara ihe niile n'usoro zuru oke? Fọdụ nwere ike ịrụ ụka na MT4 dị ezigbo enyi n'ihi na anyị ejiri ya… ebe nke ahụ nwere ike bụrụ eziokwu ruo n'ókè ụfọdụ, ọ dị m mfe iji.
Windo niile nke ikpo okwu MT4 na mbipute ndabara.
Ọtụtụ akaụntụ - MT4 na-enye gị ohere ịzụ ahịa ọtụtụ akaụntụ site na otu ikpo okwu. O nwere ike ọ gaghị ada dịka nnukwu ihe nye ụfọdụ, mana nke a dị ezigbo mkpa maka ọtụtụ ndị ahịa. Enwere m ihe ndekọ ndụ abụọ dị iche iche na otu onye na-ere ahịa nke m na-eji maka ebumnuche dị iche. Otu n'ime ha bụ akaụntụ nkịtị, nke a na-eji azụ ahịa kwa ụbọchị na nke ọzọ bụ obere akaụntụ m na-eji anwale atụmatụ ọhụrụ, ihe ngosi dị iche iche, na ntọala. Enwere m ike ịnwale atụmatụ ọhụrụ na akaụntụ ngosi, mana azụmaahịa ngosi anaghị abịaru ahịa azụmaahịa, yabụ belụsọ ma ị na-egwuri egwu iji gbuo oge ị ga-anwale ha na akaụntụ dị ndụ. Agbanyeghị, nke ahụ ga-abụ ihe na-adabaghị adaba na enweghị nhọrọ iji zụọ ọtụtụ akaụntụ n'otu ikpo okwu. Would ga-emechi ikpo okwu ma malitegharịa ya ọzọ iji banye na akaụntụ nke ọzọ. Mana site na oge ahụ, na usoro ahụ nwere ike iwe nkeji ole na ole, ohere azụmaahịa nwere ike ịgafe.
Otutu onye njikwa akuko maka MT4
Azụmahịa akpaghị aka - dingzụ ahịa n'ahịa ego abụrụla ngwa ngwa n'oge a. Ọtụtụ ndị ahịa na-eji ígwè ọrụ eji eme ihe na ndị ọkachamara ọkachamara (EAs) iji mepụta ahịa ha ma ọ bụ nata akara ngosi ahịa. MT4 dị n'ihu ụzọ banyere azụmaahịa / algorithmic trading. Ọ nwere sọftụwia mmemme MQL nwere ezigbo mmekọrịta nke na-eme ka ọ dị mfe maka ndị ahịa na ndị mmepe iji mepee ma mezue mmemme nke onwe ha. N'ezie, ịdị mfe nke ikike ya iwulite ma mejuputa atumatu akpaaka bụ otu n'ime ihe abụọ mere MT4 jiri bụrụ ihe ama ama. Ikpo okwu a bu MQL4 IDE (Integrated Development Environment), nke n’enye gi aka iwulite mmemme ahia gi nke akpaghị aka. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịzụta mmemme ma mejuputa ya n'elu ikpo okwu, ma ọ bụ zụta sọftụwia na azụmaahịa azụmaahịa ozugbo. MT4 nwere mpempe akwụkwọ arụnyere na-eme ka ọ dị mma itinye usoro mmemme azụrụ. I nwekwara ike nyochaa usoro ihe omume ị na-azụ ma ọ bụ na-emepe emepe, nke pụtara na ị nwere ike itinye ya na chaatị ndị mere eme na MT4 wee nweta nsonaazụ. Zọ a ị ga - ahụ ma ọ bụrụ na mmemme akpaghị aka ga - arụ ọrụ n'oge gara aga na ọnọdụ ahịa n'ezie na - enweghị ihe egwu iji nwalee ya n'oge.
Obodo MQL4 - Enwere ndị na-ere ahịa ole na ole n’oge a na-enye azụmaahịa dị ka TradeO na eToro, ebe ndị ahịa nwere ike ịgbaso ndị ahịa ndị ọzọ na-aga nke ọma - mana ọ nweghị otu dị nso obodo MQL4. Ejiri ndị ahịa si n’aka ndị ahịa niile mebere obodo MQL4, yabụ ọ dịka ahịa zuru oke maka amaokwu. N'agbanyeghị ụdị nke ị nwere akaụntụ, ị nwere ike ịbụ akụkụ nke obodo MQL4 ma ọ bụrụ na ị na-eji ikpo okwu MT4. Can nwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ MQL4 ma ọ bụ mepee akara ngosi dị na ala nke ikpo okwu ma họrọ onye ahịa ị ga-eso mgbe ị tụlechara arụmọrụ ha. Ihe ozo ndi MQL4 na-enye bu na inwere ike ree akara nke aka gi. Y’oburu n’inwe ahia di nma i gha edebanye aha dika onye na-ere mgbaàmà na ndi ozo n’ime obodo gha akwu ugwo ndebanye aha gi n’onwa obula mgbe i kpebiri ire oru a. Emechaa, ha ga - enwe ike idetuo azụmaahịa gị na akaụntụ ha n’elu ikpo okwu MT4.
Obodo MQL4 bụ obodo azụmahịa kachasị ukwuu.
Ọtụtụ egosi - MetaTrader ikpo okwu nwere ike ịbụ ụlọ ahịa ịzụ ahịa kasị ochie, yabụ karịa afọ 15 ọnụ ọgụgụ na ogo nke ihe ngosi ndị e wuru abawanye. Enwere otutu ihe ngosi di iche iche nke biara na MT4, dika: Movera Moges, Stochastic, Trendline, Fibonacci, RSI, Ichimoku wdg. Ọ bụ eziokwu na ịzụ ahịa n'ịntanetị abịawo ogologo oge, ma o doro anya na e nwere ọtụtụ ndị na-egosi ihe ngosi n'ebe ahụ ụbọchị ndị a. Mana, imirikiti n'ime ha dị na nzụta ma ị ga - ebudata ma bulite ha n'elu ikpo okwu. N’ikwu okwu site na ahụmịhe, ihe ngosi MT4 dị mfe iji ma ghọta. E wezụga na ha na-emelite na-akpaghị aka dị ka nke ọma, nke na-azọpụta gị nsogbu iji melite na ume. E depụtara ihe ngosi MT4 na edemede 5:
- nddị: Ndị na-egosi ihe na-egosi dị ka Ichimoku, Bollinger Bands, Nkezi Na-agagharị agagharị wdg.
- Oscillators: Ndị na-egosi na oscillation ọnụahịa dị n'etiti nnukwu ego na oke ego dị ka MACD, Stochastic, RSI wdg.
- Mpịakọta: Igosipụta ịzụta ma ọ bụ ire akwụkwọ dị ka Mkpokọta / Nkesa, Mpịakọta, Ego Efu Ego wdg.
- Bill Williams: Ngosipụta ndị agwakọtara dịka Alligator, Index Facilitation Index wdg.
- Omenala: Ihe ngosi niile a dị n’elu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịka ATR, CCI, Parabolic, ZigZag wdg.
Emegharị maka ama - Ndị ahịa dị iche iche na-akwado akụkụ dị iche iche nke ikpo okwu dabere na ụzọ ha si azụ ahịa, mana maka m atụmatụ atụmatụ mkpanaka nke MT4 bụ nke kachasị mkpa. Abụ m onye ahia ụbọchị ma ana m enyocha ahịa mgbe niile. Na-enweghị MT4 mobile trading, m ga-arapara n'ọfịs m n'ihu ihuenyo ogologo ụbọchị niile. Site na MT4 mobile platform, m nwere ike nyochaa ahịa site na ekwentị m na imeghe / nso ahịa. Mobiledị mkpanaka ahụ abụghị otu ụdị PC, mana ọ na-enye ọtụtụ ọrụ nke ikpo okwu PC. E nwere ihe karịrị ngwaọrụ nyocha na ihe ngosi 60; ị nwere ike ịnweta ọkwa, mgbaama, na ịnweta ahịa MetaTrader iji zụta ihe ngosi na ngwanrọ azụmaahịa na-akpaghị aka ma wụnye ha na ikpo okwu mkpanaka, wdg. mobiledị mkpanaka ahụ na-enye ọtụtụ ụdị iwu iji mezuo, dịka ozugbo, na-echere, ịzụta ere nkwụsị, ịzụta / ree oke na ịzụta / ere nkwụsị ịgba.
Edepụtara m ndị a dị ka atụmatụ kacha mma nke MT4 n'ihi na ha na-eme ka ịzụ ahịa dị mfe karị maka gị. Ọtụtụ nhọrọ nhọrọ na-enye gị ohere ịgbanwe site n'otu akaụntụ gaa na nke ọzọ iji mee usoro dị iche iche. MQL4 IDE na - eme ka ngwa ngwa akpaghị aka dị mfe. Ngwa ama na-enyere gị aka ịzụ ahịa ebe ọ bụla ị nwere ike. Ndị na-egosi ya dị mfe iji. Obodo MQL4 na-enye gị ọtụtụ ohere iji soro ndị ahịa ndị ọzọ na-aga nke ọma ma ree akara gị. Ndị ahịa ndị ọzọ nwere ike ịnwe mmasị dị iche iche mana atụmatụ ndị a na-akwụ ọtọ na elu.
Nke a nwekwara ike ịmasị gị:
Lelee nyocha Forex Trading Platform
I nwekwara ike ịgụtakwu banyere otu esi eme ya mepụta usoro ahia gi
Emelitere ikpeazụ: September 25th, 2019